XOG: Goodax Barre miyaa laga qaadayaa xilka Wasiirka Waxbarashada, ka dib Fadeexadii Imtixaanka fashilmay? – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu helay macluumaad hordhac ah oo ku saabsan wada hadalo xaga telfoonka ah oo dhexmaray Madaxda dawladda Puntland iyo kuwa dawladda Faderaalka Soomaaliya, kuna saabsan xaaladaha Imtixaanka Shahaadiga ee Puntland oo khal-khalgalin uga timi dhinaca dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa xariir xaga telfoonka ah la sameeyey Ra’iisulwasaaraha dawladda Faderaalka Xasan Cali Kheyre oo ay ka wada hadleen arrimaha hadda taagan ee ka yimi dhinaca Xukuumadda Faderaalka, kuwaas oo mustaqbalka Jiilasha dhalinyaradda Soomaaliyed halis galinaya.
Xogta ay heshay Puntlandtimes.com waxay cadeynaysaa in Ra’iisulwasaare Kheyre ka balanqaaday Madaxweynaha Puntland in jawaab-cad ay ka bixin doonaan warka Goodax, isla markaasna Xukuumaddu ay war ka soo saari doonto.
Puntland, waxay ku goodisay in ay qaadayso talaabo dhameystiran, haddii aysan dawladda Faderaalku jawaab rasmi ah ka bixin gafka Wasiir Cabdullaahi Goodax Barre ee kuwajahnaa nidaamka Imtixaanka Shahaadiga ah oo ay u fariisteen in ka badan 15,800 Arday maalintii shalay.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa ku amray Wasiirka Waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre, in uu soo galo magaalada Muqdisho, dibna uga soo laabto magaalada Jowhar oo ay shalay tageen isaga iyo wasiirka Amniga oo u tagay sidii Hirshabeelle uga qeybgali lahayd Imtixaanka markale wasiir Goodax, garwadeenka ka yahay.
Haddii xilka laga qaado Wasiir Goodax Barre, waxay ka dhigan tahay fashilkii ugu weynaa oo ku dhacay Xildhibaan Goodax, laakiin haddii ay ku dhamaato Canaan iyo raaligalin la’aan, waxay muujinaysaa arrimaha dawladda Faderaalka heerka ay marayaan.